Firetù Na-ahụ Maka Ngwá Ọrụ Na-ahụ Maka Ngwá Ọrụ Mba (na ndị òtù ya karịrị 1200) nọchiri anya mmasị nke ndị na-emepụta ọkụ, ndị na-ebubata ya, na ndị na-ere ya na ọkwa mba tupu ndị omebe iwu Federal na ndị na-achịkwa. Anyị na-akwalite nchekwa dị ka lynchpin nke ụlọ ọrụ ahụ. NFA kwenyere n'iji sayensị dị mma ...
Nyeghachi ọha mmadụ
Ọ bụ ezie na ihe kpatara nke ọma, ụlọ ọrụ anaghị echefu inyeghachi ọha mmadụ. Onye isi oche Qin Binwu enwetawo ihe karịrị yuan 6 nde ego ebere n'oge afọ. 1. O nyere RMB nde 1 na Pingxiang Charity Association ma wepụta RMB 50,000 kwa afọ na City Ch ...
Onye isi oche nke ụlọ ọrụ-Qin Binwu
Onye isi oche nke ụlọ ọrụ Qin Binwu mụrụ na Ọktọba 1966, nwere akara ugo mmụta postgraduate na aha ndị omenkà na ndị omenkà. Jikọọ na ụlọ ọrụ oku ọkụ maka ihe karịrị afọ 30, na-eje ozi ugbu a dị ka: Onye isi oche nke China Fireworks na Firecrackers Association, Onye otu ...